Shiinaha Magic 5CM Qabashada Waxay Daboolaysaa Daboolka Elastikada Cufan ee Wax Lagu Tuuri Karo Oo Lagu Qaadi Karo Shaashadda Faashadda & Warshadda | MOLONG
Sixir 5CM Qabasho Daboolo Daboolka Laastikada Laastikada ah Oo La Daadin Karo Oo Lagu Qaadi Karo Faashadda
Cover / faashad faashad ah oo lagu xidho sixirka
Hordhac: 5.0CM GRIP COVER, oo ku habboon cabir kasta, qaabab kasta ha ku qabsado midabbo badan oo la heli karo. markaad dalbanayso, fadlan noo dhaaf midabbada aad jeceshahay. Isticmaalka la tuuro, amniga, caafimaadka, deegaanka, raaxo! Hawlgalku waa sahlan yahay, fududahay in la isticmaalo, qof walbaa wuu xamili karaa.
Waxyaabaha Dhar aan tolmo wanaagsan lahayn
Midab Casaan, Buluug, Madow, Cagaar, Daboolid
Xabagta Latex ama Latex-bilaash
Muuqaalka Is rogrogmi kara, miisaan fudud
Isticmaalka Waa lagu duudduubi karaa qabashada tattoo
Cabir: 2.5 cm (0.5 inji), 5 cm (1 inji)
Muddo Dheer: 4.5 mitir
Xirxirida: 24pcs halkii sanduuq, 12box halkii kartoon, 288pcs halkii kartoon
Waxyaabaha: laastikada khaaska ah Dhar aan tolmo lahayn.
Fuction: Duubista daboolka xajinta tattoo ayaa lagu duudduubi karaa qabashada mashiinka tattoo
Faa'iidada: is-dhejiska, fududahay in lagu duubo xajinta qalinka tattoo, qabashada tatuurada SS iyo qabashada la tuuri karo. Ka dhig qabashada si kasta oo size aad jeceshahay, oo raaxo leh in la maareeyo dareenka.
Faa'iidadayada ku duuban cajaladda xajinta:
1. tayo fiican, maadada heerka sare iyo dherer dheer oo dheer.
2. qiimo weyn. i weydiiso, waxaad layaabi doontaa
3. xulashooyin habaysan. Sanduuqa kartoo, xirxirida kartoo, oppbag kartoo,
4. udub dhexaad loo habeeyay (astaanta daabacaadda) .Waxaan u qabanaa OEM dad badan oo alaab-qeybiyeyaal ah.
Faashadaha faashadda dhejiska meeshiisa lagu hayo. Faashadda isku-dhejinta LIGHTWEIGHT oo isku dhegan, oo aan ku xirnayn waxyaabaha kale ama maqaarka. AADAN la istcimaalayn clips ama dhejiyeyaasha.
Duubista Daboolaha Wadajirka ah ee Isku-xidhka Tattoo-ga ayaa ah Midab-Koodhka qalabkaaga iyo duubista.
Strips-kan isku-dhejiska ah ee Is-dhejiska ah waa khafiif, 1 sanduuq waxaa ku jira 12 duub oo 2 ages faashad ballac ah oo dheerarkeedu yahay 4.5M dheer
Midab: buluug cagaaran camo casaan Isku qasan. Fadlan ogsoonow: u dir midabada si aan kala sooc lahayn.
BADAN - Daboolka xajinta tattoo ayaa lagu duudduubi karaa qabashada mashiinka tattoo. Caawinta ka hortagga siibashada iyo sameynta farshaxan farshaxan oo qumman. Sidoo kale waa la codsan karaa si loo ilaaliyo qaybo badan oo jirka ah.
Hore: 30mm Midab Gradient Qabsashada Tattoo Qabsashada
Xiga: Wareegtada gadaasha gadaal ee saxarada kumbuyuutarka kuraasta qurxinta qurxinta shaqada saxaro qaadista saxarada wareega wareega
Dhaqdhaqaaqa Aaladda Dijital Dual ee LCD d LCD d ...